Meizu X2 ကို ၂၀၁၈ အကုန်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည် Androidsis
လူးဝစ်လိုပက်ဇ် | | Meizu, မိုဘိုင်း
Meizu သည် Meizu X ကို Helio P20 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အလားတူလတွင်ဒုတိယထုတ်ကုန်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူက၎င်းကိုမစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ Meizu ဒုဥက္ကPresident္ဌ Li Nan ကဤကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ, ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနှင့်ပင်စျေးနှုန်း.
Meizu X သည် ၂၀၁၆ တွင်aကွေးမျက်နှာပြင်နှင့်ကြွေဖန်အဖုံး, ထိုအချိန်ကအလွန်ဘုံမဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုသည်, ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေ Meizu X2 ၏ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်နေကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့လီနန်ကဤကိရိယာကိုပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလတွင်ထွက်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Meizu X2 ၏တရားဝင်အင်္ဂါရပ်များ
Li Nan က Meizu X2 သည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းမဟုတ်၊ သီးသန့်ထားသည့်ဖုန်းလည်းမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များစွာကသူသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်း၏အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါပါးပျဉ်းအောက်မှာကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာသည် 6GB RAM နှင့်အနည်းဆုံး 64GB သိုလှောင်မှုနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Meizu X2 ၏စတင်ရောင်းချသည့်စျေးနှုန်းမှာ ၂၉၉၉ ယွမ်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 ယူရို.
Meizu 15 Plus ၏ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့ နှင့်အခြားကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်တစ် ဦး ထုတ်ဖေါ် ဘေးဘောင်မပါဘဲမျက်နှာပြင်, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Meizu X2 တွင်အချိုး ၁၈: ၉ အချိုးအစားနှင့်အတူဤဒီဇိုင်းရှိသည်ဟုပြောနိုင်သည်။ အခြားခိုင်မာသောကောလဟလများက X18 တွင်ဒုတိယစက်ဝိုင်းပုံရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
Meizu X2 အပြင်လီနန်ကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကိုဖြန့်ချိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် Meizu E3 သည်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ Meizu E3 ကိုမတ်လတွင်ကြေညာဖွယ်ရှိပြီး Snapdragon 660 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ထားဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်မကြာမီလာမည့် Mediatek Helio P70 တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Meizu » Meizu X2 ကို ၂၀၁၈ အကုန်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်